HTC na-ebupụta Android Nougat na A9 146 ụbọchị mgbe emechara karịa nkwa | Gam akporosis
Mmelite ụbọchị nke anyị na-ahụ onwe anyị n'oge ahụ na Nougat ahụ nke malitere ịnata site na njedebe abụọ nke ụdị ole na ole, ma ọ dịkarịa ala ndị isi na ndị na-eme mgbalị ha ka onye ọrụ ahụ wee nwee uru nke 7.0; na-eche 7.1.1 ịbịaru kwa maka izu ma ọ bụ ọnwa ole ma ole na-abịa.
Mgbe taa anyị maara na Samsung akwụsịla maara Nougat melite Maka Galaxy S7 na S7 ihu, HTC dị n'etiti etiti otu A9 na-anata gam akporo 7.0 Nougat ugbu a. Ngwaọrụ nke na-abanye n'ụlọ akwụkwọ nke HTC terminals nke anyị nwere ike ịchọta HTC 10, A9 ma ọ bụ ọbụna na nso nso a mara ọkwa U Ultra, ihe karịrị ike mmụọ nsọ nke Google Pixel.
O doro anya na akụkọ a nwere ike ghara ịhụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi ihe kpatara HTC ji etu ọnụ na A9, nke kachasị dị n'etiti, ga-enwe mmelite usoro. Daysbọchị 15 mgbe ịmalitere na ngwaọrụ Nexus. Ma ọ bụ na ọ gaghị abụ oge mbụ ụlọ ọrụ Taiwanese na-ekwu okwu n'otu okwu maka njedebe ndị gara aga, nke mere na mgbasa ozi na-egosi ihe na-emezughị emezu amalitela ịmalite.
Ọfọn, ọ mechaa kemgbe ụbọchị ole na ole kemgbe Nexus 5X na Nexus 6P nwetara gam akporo Nougat 7.0. Ọ bụrụ na anyị amalite ịgụ, abụrụ ụbọchị nke 146. Ọbụgodi ihe kariri ụbọchị 30 ebe egosiri na 7.1.1 na 5X na 6P.
Banyere mmelite ahụ, Nougat na-eweta multi-window, dezie ntọala ngwa ngwa, ọkwa dị mma na ọtụtụ ndị ọzọ. Ndị nwere HTC A9 kwesịrị ịnweta akụkụ nke ekwentị gị ebe a na-enyocha mmelite, ebe ọ bụ na ụbọchị a na ụbọchị ndị na-esote ha nwere ike ịnwe òkè ha na Nougat.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » HTC One A9 mechara nweta mmelite Nougat mgbe ụbọchị 146 gasịrị
WhatsApp enweela ọkwa Nougat na-arụ ọrụ nke ọma